एउटा ग्यालरी के हो? कसरी लेख्न र शब्द प्रयोग गर्ने?
प्रयोग बाहिर समय धेरै शब्दहरू, थप आधुनिक समकक्षों बदलिएको। उदाहरणका लागि, ग्यालरी, आज अब केहि थाहा के छ। जे भए पनि, सबैले यसको मूल मूल्य को सोच्छ। शब्द फ्रान्सेली भाषा देखि उधारो छ।
एउटा ग्यालरी के हो?
मूलतः यो शब्द एउटा कोठा निर्माण को विभिन्न भागहरु बीच सार्न छ चाहनुभएको। यो कहिले काँही घर झालर, बाहिरी परिधि मा स्थित थियो। स्तम्भहरू र धेरै कट्टर एक अर्को देखि equidistant - अन्य यस्तै वास्तुकला समाधान देखि मुख्य भिन्नता। चर्च को भाग - शब्द को साँचो अर्थमा आधुनिक कौसी चाहनुभएको।
तिनीहरूले नै शब्द र लामो कोठा, जो को ठूलो Windows को एक स्ट्रिङ प्रतिनिधित्व गर्ने अनुदैर्ध्य पर्खालहरु को एक प्रतिनिधित्व गर्छ। साथै, ग्यालरी, एक थिएटर आउन सक्छ पत्ता। यो शब्द शीर्ष स्थानमा छ। अन्यथा आफ्नो नाम - ग्यालरी। भूमिगत संरचना बीच तथाकथित सैन्य संक्रमण को lexicon मा, जमीन मा dug। उदाहरणका लागि, एक मेरो ग्यालरी छ। यो पनि खान वा अन्य भूमिगत सुविधाहरु को एक किसिम को लागि अग्रणी, को मेरो मा संक्रमण बुझाउँछ।
ग्यालरी प्रदर्शनियों र चित्र Ferris कोठा लागि अयोग्य भनिन्छ। अक्सर विशिष्ट नाम संग संयोजन प्रयोग गरिएको। उदाहरणका लागि, Tretyakov ग्यालरी। एक लाक्षणिक अर्थमा, यो एउटा स्ट्रिङ, लामो श्रृंखला, कुनै पनि प्रकारको वस्तुहरू एक संग्रह हो। उदाहरणका लागि, freaks एक ग्यालरी, प्रसिद्ध लेखकहरू ग्यालरी। रिसोर्टमा शहरहरूमा, त्यहाँ पिउने ग्यालरी रूपमा यस्तो कुरा हो। यो थप्न-मा पम्प-कोठा, उपचार लागि निमित्त जो। यस्तो संरचना यो वर्ष कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सम्भव बनाउँछ खनिज पानीका मुहानहरू को हो। भवन पानी आपूर्ति, वेंटिलेशन र सरसफाई संग सुसज्जित छ।
त्यसैले शब्द ग्यालरी हिज्जे कसरी को प्रश्न, त्यहाँ हुनु हुँदैन यो, एक एकदम सरल टोकन छ। तैपनि, तिनीहरूले यस जस्तै लेख्न: जी-एक-आर-ई-आर-ई-म। को उच्चारण pronouncing जब तेस्रो syllable (प्रभाव ई) मा गरिन आवश्यक छ। Cognates "मचान" र "ग्यालरी" छन्।
आज शब्द पनि अक्सर प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया यो केही सर्कलमा सुने गर्न सकिन्छ। तसर्थ, बहुमत त अक्सर यस्तो सुन्दर र "बुद्धिमान" टोकन एक वाक्यांश बन्द देखाउन मौका छ छैन। यो शब्द "ग्यालरी" एउटा वाक्य बनाउन आवश्यक हुन्छ भने, यो सजिलो हुनेछ। मुख्य कुरा त प्रश्न आवेदन समस्या छैन, यसको मूल्य थाहा छ। उदाहरणका लागि, तपाईं, "भन्न सक्नुहुन्छ म अहिले म तस्वीर हेर्न ग्यालरीमा Ivanov गए। त्यसैले-त्यसैले म भन्न पर्छ, malyuet Ivanov कुरा हाम्रो! "अथवा तपाईं हवाला, केटी मिति आमन्त्रण सक्छ" टिकट, दुर्भाग्यवश, केवल ग्यालरी प्राप्त गर्न व्यवस्थित। "
यो यो छ - ग्यालरी मार्फत बेडरूम देखि भान्सा मा गए कसरी कुरा, यो आवश्यक छैन, गलियारे किनभने छ। तपाईं प्राचीन महल वा princely सम्पत्ति बस्नुहुन्छ भने सकेसम्म यस्तो कार्य लिनुहोस्। खैर, वा कम से कम यो कहिल्यै यात्राहरु मा यस्तै ठाउँमा छ। त्यसैले, यदि तपाईं के एउटा ग्यालरी थाहा छ, शब्द फरक परिस्थितिमा कार्यहरू वा वस्तुहरू संकेत गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हामी नारी यस्तै छ भनेर दयालु विशेषण बोल्न
अंग्रेजी भाषामा प्रश्न: प्रकार र संरचना
"धिक्कार प्याज": phraseologism मूल्य, इतिहास र उदाहरण
Ostroh महल: वर्णन, इतिहास, रोचक तथ्य र समीक्षा
निर्दोष को अनुमान। कला। 49 संविधान को
Tver आकर्षण: बच्चाहरु संग 1 दिन को लागि हेर्न के? समीक्षा, फोटो
बुना रूमाल लोकप्रियता को शिखर मा सधैं crocheted
"स्पेनी क्वार्टर" - समीक्षा, विकासकर्ता, म्याद। शहरी विकास परियोजना "A101" एलसीडी "स्पेनी क्वार्टर" नयाँ मास्को
"Saperavi" - वर्ण रक्सी
कब्जियत लागि उपाय